Project Airbus A321 injini akavhara pasi pashure yasimuka
mubvunzo Project Airbus A321 injini akavhara pasi pashure yasimuka
2 makore 2 mazuva apfuura #223 by JanneAir15
Mhoro! Ini paIndaneti kuti Airbus A320 Family Mega Pack. Ndakazviedza ose yokutevedzera (A318, A319, A320, A321) asi kana ini yasimuka pamwe A321 injini yayo akavhara pasi pakarepo pashure mavhiri kuwana kubva pasi. Other ndege kuti rongedza ichi vasina dambudziko iri zviri chete pamusoro A321. Ini vakatevera kuongorora uye vakatendeukira injini pamusoro chete nzira yakarurama. Handizivi kuti chii chakaipa ipapo. Ndapota ndibatsireiwo pamwe ichi.
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: Joval
2 makore 2 mazuva apfuura #224 by Gh0stRider203
Ini handigoni kuita zvakawanda sezvo ndiri pakati nendege sezvo tinotaura (LFRG - KDFW) muna 747-400LCF, asi kamwe ini nenyika, ndichashanda kukopa kuti ndokukunda kuitarisa.
2 makore 2 mazuva apfuura #225 by Tonny0909
Unofanira kuisa ELAC2 Off pana FLT CTL- chikamu panguva upperhead remadziro. Other matatu akaisa ON. (Sec 2,3 uye FAC2)
Uye dzidza Airbus kutiza Mitemo:
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: Gh0stRider203, JonesyMcJonesFace
2 makore 2 mazuva apfuura #226 by JanneAir15
Ndokutenda zvikuru! Ndichaenda vaedze kuti.
2 makore 2 mazuva apfuura #227 by JanneAir15
Aiwa, hazvina zvakashanda. Ndichiri akamuka kukanganisa chete "jenareta 1, jenareta 2 uye Hydraulics 1 # 2" anozivikanwa mutsvuku pamusoro Info kuratidza.
2 makore 2 mazuva apfuura #228 by JanneAir15
Hapana chikonzero kubatsira zvakare! Ini ngadzirambe dambudziko. Tonny0909, imi makanga kurudyi asi ELAC2 ndiye chete FLT CTL chinja here kuva Off. Other haizoshandisi unofanira kuva pasi! (Kusanganisira chikamu rworuboshwe pamusoro upperhead paneeli) Ndizvozvo! Asi Ndinokutendai rubatsiro rwenyu Tonny0909.
2 makore 2 mazuva apfuura #229 by Tonny0909
Zvakanaka ndakati kuti pana kwangu yepakutanga mumhanyi;
"Other matatu Gadza. (Sec 2,3 uye FAC2)"
Vari pasi apo "Off" hakuratidzwi.
2 makore 2 mazuva apfuura #230 by Dariussssss
Akafara kuona uyu kugadziriswa. Kana uchida chimwe chinhu, ngatiregei munoziva.
2 makore 2 mazuva apfuura #234 by Gh0stRider203
Dariussssss akanyora: Ndinofara kuona uyu kugadziriswa. Kana uchida chimwe chinhu, ngatiregei munoziva.
Huge mazvita kuna Tonny0909 akubatsire!
Time chokusika peji: 0.526 mumasekonzi